Ubomi bemihla ngemihla bafazi bazaliswa yimincili kunye neemvakalelo, kwaye kaninzi abakwazi ukufumana isiphepho sabo sengqondo. Ngubani na onokukuhleka, baxoxe ngeengxaki zabo, bangathini na babo nabahlobo babo abakhulu. Ngamanye amaxesha ukuthetha ngefowuni akwanele, umnqweno wokuthetha ngokuqhagamshelana nabantu abanjengabantu abafana kunye nekhofi okanye itiye. Kule meko, badibana kwiqela le-bachelorette-isiganeko apho abafazi kuphela baqokelela khona.
Umfazi otshatileyo, mhlawumbi oza kuqala kufuneka alwe nomyeni wakhe ngenxa yokuzimela kwakhe. Kungenxa yokuba akukho mlingane oya kuvuma ukuvumela umfazi wakhe ukuba aye kwiqela lokukhupha. Ngokuqinisekileyo, indoda ithemba umfazi wayo, kodwa ngexesha elifanayo uyaqiniseka ngokuqinisekileyo ukuba kumfazi wakhe ehlabathini akukho nto ibaluleke ngaphezu kwakhe. Ngoko ke, unokucinga ukuba xa umfazi ehlangana nabahlobo bakhe, uya kuxoxa nomyeni wakhe. Yingakho umfazi kufuneka agxininise, kodwa ngokunyanisekileyo umchukumise wakhe othandekayo kuqala, ukuba wadibanisa ubomi bakhe kunye naye, kungekhona ukuze amthobele esidlangalaleni. Okwesibini, umfazi umele akhumbuze umyeni wakhe ngokuthi ngokunikela izithembiso zokunyaniseka nothando, akazange azame ukuchitha ubudlelwane kunye nabahlobo bakhe. Kwaye emva kokuba umfazi avumela indoda kunye nabahlobo kwibala lemidlalo okanye ngokuloba.
Enyanisweni, akubona bonke abayeni abanjalo abanini. Ukulawula zonke iinyawo zomfazi wakhe kwaye ungamvumeli ukuba ahambe naphi na. Ukuba iqela lekhuni liyinkokheli endala yomfazi, kungcono ukhethe iintsuku ezithile kwaye uxwayise umyeni wakhe ngokungabikho kwakhe kwangaphambili.
Kuya kuba ngcono kuphi ukuhlela iphathi ye-bachelorette? Kukho iinketho ezininzi: ukusuka kwikhenkce ukuya kumdaka womntu okanye indlu. Kwinkampani yamantombazana ayifuni ukucinga ngemenyu - nolu khetho lokuqala lufanelekile. Kwakhona kunokwenzeka ukuba abanye abahlobo bakho baneendawo ezifanelekileyo zezimali. Kodwa ukuba kuyimfuneko ukuphoqeleka intombi yakho ukuba ihlanganyele inceba okanye yimbi ngakumbi ukufumana imali, eyayihlehliselwa umhla wokuvula. Kwakhona, abantu abangaziwayo abavumelanga ukunika intlanganiso ubuhlobo obusondeleyo. Option, ukulungiselela iphathi ye-bachelorette kumntu wonke ekhaya. Kodwa khumbula, ukuba kwiqela lokukhupha akumele libe ngabameli beesondo eziqinileyo okanye iqela lokukhupha liza kutshabalaliswa.
Kungcono ukuhlangana kunye nentombi enye okanye ukuphonsa imali kwaye uthenge amathikithi kubayeni, eminye imidlalo. I-dacha nayo ifanelekile kwesi siganeko, kodwa kuyimfuneko ukuba ilungiselelwe kakuhle, kuba abafazi abayi kufuna ukuthabatha amanzi emthonjeni baze batye iinkuni. Kusenokwenzeka ukuba umntu akayi kukwazi ukuhlala ubusuku, ngoko kuyimfuneko ukuba iintombi ezingenayo imoto zingabuyela ekhaya.
Sisabalalisa yonke imisebenzi.
Ukuba ufuna ukuhlangana kunye nomhlobo, kufuneka uxoxe nazo zonke iinkqubo zombutho kwangaphambili. Umzekelo, khetha ngubani oza kuba noxanduva lokutya nokusela. Abanye baya kupheka, abanye baxube nonxila okanye bathenge iwayini. Ukuba kunokwenzeka, izitya kufuneka zibe lula, akudingeki ukuba uchithe ixesha elide, kodwa ziyakwazi ukuhlukana ekuhlanjululeni, kuba unokuzibethela.
Kuya kuba ngcono ukupheka ekhaya, ukwenzela ukuba ungabi nciphisa ixesha elongezelelweyo, kwaye uchithe kwi-communication. Ngaphambi kwesihogo, umsikazi uya kukuxelela oko kufuneka uyenze nawe. Mhlawumbi umntu unamacenge amahle e-napkins okanye kwiiglasi. Kuya kuba yinto engafanelekiyo xa ushiya izidlo ezincinci kumalungu omndeni osindayo, ongeke abe kwiqela lokukhupha. Maye nabo mababe mncinane.
Yintoni eya kuba nomdla kuyo wonke umntu?
Yintoni endimele ndiyithetha ngayo, kodwa yintoni engekho kwiqela lokukhupha? Lo mbuzo ungabonakala ungaqhelekanga, kuba abafazi nabo baqokelela kwisangqa esincinci ukuze bakhulume ngezinto zonke. Kodwa ebomini babo bonke abesifazana kukho izihloko zabo ezigulayo, kwaye kuya kuba ngcono ukuba abanye bangabakhathaleli. Ngokomzekelo, kuya kuba bubi ukuthetha ngovuyo lobubele bakho, kunye naloo mhlobo ongenakho ukhulelwe iminyaka emininzi.
Ukuba ngaba bonke abahlobo bakho bangayiqhayisa ngokubanzi, kuya kuba kubi ukuthetha ngefilimu zikaFederico Fellini okanye ingcamango yefilosofi kaJean-Paul Sartre. Ngoko ke, kufuneka ukhethe izihloko ezingathathi hlangothi kwiintetho eziza kuba nomdla kubo bonke abahlobo bakho.
Inhlanhla kuwe kwi-bachelorette party!
"I-Australia" kunye noNicole Kidman bahlehliswa
Ngaba kukuhle ukwenza i-napkins yeholide?
Iingqungquthela zivuyisana ngoNyaka omtsha: iimbuliso zangaphambili zoNyaka omtsha 2016
Amabhayisikobho amatsha, kungekudala kwizikrini
Iimidlalo eziphambili zebhodi
Yintoni eya kuba yihlobo le-2017 eRashiya - i-Hydrometeorological Centre isibikezelo
UAlicia Vikander - ubuso obutsha bukaLouis Vuitton
Kunokuba uhlambulule i-varnish ngeminwe okanye ngepiki ukuba uye waqina?
Izindlela kunye nezindlela zokukhulelwa emva kokubeletha
Kuthetha ukuthini ubuhle?
I-Ricotta kunye nekhekile yekotato
Iqhwala ngezandla zethu: njani ukwenza i-snowballs kwi-wooton yekotoni ekhaya
I-paella yaseSpeyin yaseSpain
Izinto ezi-3 ukuba umntu wokwenene akwenze
Utywala lwezityalo zangaphakathi
Isitala sangaphandle - into entsha yangaphakathi-2016
Umvuzo we "Princess"